စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား - အပိုင်း (၁) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on October 13, 2011 at 10:07 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ပတ်ဝန်းကျင် တွင် အကျိုးရှိရှိပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာသဒ္ဒါကို ပိုင်နိုင်စွာ နားလည်ထားရမဲ့အပြင် အဓိကကျတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံ သဘောတရားများကိုလည်း သိရှိထားရန် လိုပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးပြုတဲ့အခါတိုင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမဲ့ အဓိကအချက်များကို အလေးထားဖော်ပြထားပါတယ်။ အောက်ပါကဏ္ဍများ၌ အခြေအနေတိုင်းတွင် ဆီလျော်သော အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးပြုခြင်းကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့ ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်သော အကြံပြုချက်များ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေတိုင်းတွင် နားလည်ထားရန် လိုအပ်တဲ့အရေးပါသော အခြေခံအချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
လုပ်ငန်း (Function): စကားပြောရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ?
နယ်ပယ် (Domain): ဒီအပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့ဆီမှာကိုယ့်ရာထူးကဘာလဲ?ကိုယ့်တာဝန်ကဘာလဲ?
What is my position in this conversation? What is my role?
သတ်မှတ်အသုံးအနှုန်း (Register Use): ဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေတာလဲ?
အရေးကြီးမှု (Urgency): ပြောမဲ့စကားကဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးလဲ?
How important is what I have to say?
လုပ်ငန်းဆိုတာကတော့ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ ပြောနေတဲ့ စကားဟာ လေးနက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လား? ပြောနေတဲ့စကားဟာ အပျင်းပြေဖို့လား? ဥပမာအနေနဲ့ အောက်ပါ ၀ါကျကို ကြည့်ပါ။
You’ve got to be joking! (နောက်နေပြန်ပါပြီ!)
ဒီဝါကျဟာ လေးနက်တဲ့စကားကို ပြောနေချိန်မှာဆိုရင် သင့်အပြောကို နားထောင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည် သင့်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ သင်ပြောတဲ့စကားကို သော်လည်းကောင်း အလေးအနက် မထားဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ ဒါဟာ မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပြီး သင့်အနေနဲ့ သင့်ရာထူးကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဝါကျကိုပဲ နေ့လည်စာ စားနေစဉ် သင်ဟာသပုံပြင်ပြောတုန်း မှတ်ချက် ချတာဆိုရင်တော့ သင့်အပြောကို သူ့အနေနဲ့ ရယ်စရာအဖြစ် ယူဆတယ်လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ပြောလက်စပုံကို ဆက်လို့တောင်မှ ပြောချင်ပြောပေလိမ့်ဦးမယ်။
ဒီဥပမာကတော့ ရိုးရှင်းကြောင်း ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဘာသာစကားရဲ့ လုပ်ငန်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည် ဘယ်လိုအသုံးအနှုန်း၊ ဘယ်လိုပုံစံတွေကို သုံးရမယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ညှိနှိုင်းခြင်း၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ တင်ဆက်ခြင်း အစရှိတဲ့ ဘာသာစကားလုပ်ငန်းတွေ အတွက်ဆိုရင် ယဉ်ကျေးတဲ့ရုံးအသုံးအနှုန်းပုံစံလိုအပ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ အချိန်တွေ ကျရင်တော့ ရင်းနှီးတဲ့အရပ်သုံးစကားကို သုံးပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ရင်းနှီးလွတ်လပ်တဲ့ အချိန်အခါတွေဟာ သင့်အနေနဲ့ ဥပမာစကားများ (Idiomatic phrases) ကိုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းကြွားခွင့် ရနိုင်ပါသည်။ အလုပ်ကိစ္စတာဝန်များဆိုင်ရာ ဘာသာစကား လုပ်ငန်းများတွင် (formal language functions) အရပ်သုံး စကားများ (colloquial) (သို့) ဥပမာစကား (idioms) များကို မသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေများအတွက် မှန်ကန်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်း: နယ်ပယ်၊ သတ်မှတ်ချက်၊အရေးကြီးမှု
နယ်ပယ် (Domain) သည် သင်ပါဝင်နေတဲ့ ဘယ်ဆွေးနွေးပွဲ၌ မဆို သင်ရရှိတဲ့အခွင့်အရေး နဲ့ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ တာဝန်များကို သိရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးမှု သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သဘောဆောင်လား? အလုပ်အတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးနေ တာလား?။
ဒီအခြေအနေတစ်ခုစီမှာ ကိုယ်ရေးကိုတာ မေးခွန်းများကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောနေတဲ့စကား (Conversation)သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သဘောဆောင်နေရင် ဘယ်မေးခွန်းကိုမဆို လွတ်လပ်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ အလုပ်အတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးနေတာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်အကြိုက်၊ အစရှိတာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမေးခွန်းများသည် မသင့်လျော်ပေ။ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ဆိုလည်း ဒီအတိုင်းပါပ။ဲ အပြန်အလှန် ပြောနေသူနှစ်ဦးရဲ့ ဆက်ဆံရေးပေါ် လိုက်ပြီး အချို့ မေးခွန်းတွေကို မေးနိုင်ဖြေနိုင်ပါတယ်။
သတ်မှတ်အသုံးအနှုန်း (Register Use)
သတ်မှတ်အသုံးအနှုန်း (Register Use) သည် သင်နှင့် သင်စကားပြောနေသူ ကြားမှာရှိ တဲ့ ဆက်ဆံရေးပေါ် မူတည်ပြီး သုံးရမဲ့ ဘာသာစကား အမျိုးအစားကို ပြောခြင်းဖြစ် တယ်။ သင်နှင့် စကားပြောနေသူသည် သင့်ရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားလား? ဒါမှမဟုတ် ထိုပုဂ္ဂလ်သည် သင့်ရဲ့ အထက်လူကြီးလား?။ ဒီလူနဲ့သင်ဟာ ရင်းနှီးလား? နောက် ပြောင်လို့ရလား? ။
ယေဘုယျအားဖြင့် အခြေအနေဟာ ရင်းနှီးမှုပိုလေလေ စကားအသုံးအနှုန်းကလည်း အရပ်ဟန်ပိုဆန်လေလေပါပဲ။ US မှာဆိုရင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဟာ အများအားဖြင့် အချင်းချင်း ပထမနာမည်(first name) ခေါ်ပြီး အရပ်သုံးစကား ကိုပိုသုံးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်မှာလည်း အထက်လူကြီးနဲ့ပြောတာဆိုရင်တော့ မှန်ကန်ယဉ်ကျေးတဲ့ စာစကား ပေစကား (formal language) ကိုပဲ အသုံးပြုဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ (ဥပမာ Ms. Smith.)
အရေးကြီးမှုသည် ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ရဲ့ အရေးကြီးပုံနှင့်ပတ်သက်ပါတယ်။ အရေးကြီးပုံကို ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ ဘာသာစကားအသုံးအနှုန်းကလည်း ဖော်ပြနေပါလိမ့်မယ်။ ပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာက အရမ်းအရေးကြီးနေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားနဲ့ ပြောနေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် အမိန့်ပေးတဲ့ပုံစံ (Imperative form) ဟာ သင့်တော်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ Mr. Jackson ကို ခေါ်လိုက်စမ်း! (Call Mr. Jackson!) အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ကိုယ်ပြောမဲ့ စကားက အရေးလည်း သိပ်မကြီးဘူး။ ပြောနေတဲ့သူကလည်း ကိုယ့်ရဲ့အထက်အရာရှိဆိုရင်တော့ အဲဒီလူရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကိုရဖို့ ပိုပြီး မှန်ကန်ယဉ်ကျေးတဲ့ စာစကားပေစကား(formal forms)ကို အသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ- “နှောက်ယှက်မိတာကိုခွင့်လွှတ်ပါ Mr.Brown။ ဒါပေမဲ့အချိန်လေး ပေးနိုင်တဲ့အခါကျရင် ဒီအစီရင်ခံစာကို တဆိတ်လောက် ကြည့်ပေးနိုင်ပါမလား ခင်ဗျား။”
“Excuse the interruption Mr. Brown, but would you mind takingalook at this report when you have the time?”
ဒီနေရာမှာလည်း အမေရိကန်လုပ်ငန်းခွင် တွေမှာဆိုရင် ပိုအရေးကြီးတဲ့ စကားများကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဒဲ့ဒိုး ပြောတတ်ကြပါတယ်။သိပ်အရေးမကြီးတဲ့ စကားများကိုတော့ စာစကားပေစကား (formal language) ကို အသုံးပြုပြီး ပျော့ပြောင်းအောင် လုပ်ကြပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား - အပိုင်း (၃)
စီးပှားရေးလုပျငနျးဆိုငျရာ အင်ျဂလိပျစကားပွော ပတျဝနျးကငျြ တှငျ အကြိုးရှိရှိပါဝငျနိုငျဖို့ဆိုရငျ အင်ျဂလိပျစာသဒ်ဒါကို ပိုငျနိုငျစှာ နားလညျထားရမဲ့အပွငျ အဓိကကတြဲ့ ဆကျသှယျရေးအခွခေံ သဘောတရားမြားကိုလညျး သိရှိထားရနျ လိုပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးမှာ အင်ျဂလိပျစာ အသုံးပွုတဲ့အခါတိုငျး ထညျ့သှငျးစဉျးစားရမဲ့ အဓိကအခကျြမြားကို အလေးထားဖျောပွထားပါတယျ။ အောကျပါကဏ်ဍမြား၌ အခွအေနတေိုငျးတှငျ ဆီလြျောသော အင်ျဂလိပျစာ အသုံးပွုခွငျးကို အထောကျအပံ့ဖွဈစမေဲ့ ဘာသာစကားနှငျ့ပတျသကျသော အကွံပွုခကျြမြား ပါဝငျပါတယျ။ ဆကျသှယျရေးအခွအေနတေိုငျးတှငျ နားလညျထားရနျ လိုအပျတဲ့အရေးပါသော အခွခေံအခကျြမြားကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
လုပျငနျး (Function): စကားပွောရတဲ့အဓိကရညျရှယျခကျြကဘာလဲ?
နယျပယျ (Domain): ဒီအပွနျအလှနျစကားပွောတဲ့ဆီမှာကိုယျ့ရာထူးကဘာလဲ?ကိုယျ့တာဝနျကဘာလဲ?
သတျမှတျအသုံးအနှုနျး (Register Use): ဘယျသူနဲ့စကားပွောနတောလဲ?
အရေးကွီးမှု (Urgency): ပွောမဲ့စကားကဘယျလောကျတောငျအရေးကွီးလဲ?
လုပျငနျးဆိုတာကတော့ ကိုယျပွောတဲ့စကားရဲ့ ရညျရှယျခကျြကို ဖျောပွနပေါတယျ။ ပွောနတေဲ့ စကားဟာ လေးနကျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြခဖြို့လား? ပွောနတေဲ့စကားဟာ အပငျြးပွဖေို့လား? ဥပမာအနနေဲ့ အောကျပါ ဝါကကြို ကွညျ့ပါ။
You’ve got to be joking! (နောကျနပွေနျပါပွီ!)
ဒီဝါကဟြာ လေးနကျတဲ့စကားကို ပွောနခြေိနျမှာဆိုရငျ သငျ့အပွောကို နားထောငျနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျသညျ သငျ့ကိုသျောလညျးကောငျး၊ သငျပွောတဲ့စကားကို သျောလညျးကောငျး အလေးအနကျ မထားဘူးဆိုတာကို ဖျောပွနပေါတယျ။ ဒါဟာ မကောငျးတဲ့ လက်ခဏာဖွဈပွီး သငျ့အနနေဲ့ သငျ့ရာထူးကို အသေးစိတျရှငျးလငျးဖျောပွဖို့ လိုအပျနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီဝါကကြိုပဲ နလေ့ညျစာ စားနစေဉျ သငျဟာသပုံပွငျပွောတုနျး မှတျခကျြ ခတြာဆိုရငျတော့ သငျ့အပွောကို သူ့အနနေဲ့ ရယျစရာအဖွဈ ယူဆတယျလို့ ကောကျခကျြခနြိုငျပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ ပွောလကျစပုံကို ဆကျလို့တောငျမှ ပွောခငျြပွောပလေိမျ့ဦးမယျ။
ဒီဥပမာကတော့ ရိုးရှငျးကွောငျး ထငျရှားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး ဘာသာစကားရဲ့ လုပျငနျးကို ထညျ့သှငျးစဉျးစားခွငျးသညျ ဘယျလိုအသုံးအနှုနျး၊ ဘယျလိုပုံစံတှကေို သုံးရမယျဆိုတာကို ဆုံးဖွတျတဲ့အခါမှာ အထောကျအပံ့ဖွဈစပေါတယျ။ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ညှိနှိုငျးခွငျး၊ တှဆေုံ့မေးမွနျးခွငျး၊ တငျဆကျခွငျး အစရှိတဲ့ ဘာသာစကားလုပျငနျးတှေ အတှကျဆိုရငျ ယဉျကြေးတဲ့ရုံးအသုံးအနှုနျးပုံစံလိုအပျပါတယျ။ လှတျလပျတဲ့ အခြိနျတှေ ကရြငျတော့ ရငျးနှီးတဲ့အရပျသုံးစကားကို သုံးပါတယျ။ အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ ရငျးနှီးလှတျလပျတဲ့ အခြိနျအခါတှဟော သငျ့အနနေဲ့ ဥပမာစကားမြား (Idiomatic phrases) ကိုကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကွှားခှငျ့ ရနိုငျပါသညျ။ အလုပျကိစ်စတာဝနျမြားဆိုငျရာ ဘာသာစကား လုပျငနျးမြားတှငျ (formal language functions) အရပျသုံး စကားမြား (colloquial) (သို့) ဥပမာစကား (idioms) မြားကို မသုံးတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးအခွအေနမြေားအတှကျ မှနျကနျတဲ့ အင်ျဂလိပျစာအသုံးအနှုနျး: နယျပယျ၊ သတျမှတျခကျြ၊အရေးကွီးမှု
နယျပယျ (Domain) သညျ သငျပါဝငျနတေဲ့ ဘယျဆှေးနှေးပှဲ၌ မဆို သငျရရှိတဲ့အခှငျ့အရေး နဲ့ လုပျဆောငျရတဲ့ တာဝနျမြားကို သိရှိခွငျးပငျဖွဈသညျ။ ဆှေးနှေးမှု သညျ ကိုယျရေးကိုယျတာ သဘောဆောငျလား? အလုပျအတှကျ လူတှစေ့ဈဆေးနေ တာလား?။
ဒီအခွအေနတေဈခုစီမှာ ကိုယျရေးကိုတာ မေးခှနျးမြားကို နညျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ဖွရေမှာဖွဈပါတယျ။ ပွောနတေဲ့စကား (Conversation)သညျ ကိုယျရေးကိုယျတာ သဘောဆောငျနရေငျ ဘယျမေးခှနျးကိုမဆို လှတျလပျစှာ ဖွဆေိုနိုငျပါသညျ။ ဒီလိုမှမဟုတျပဲ အလုပျအတှကျ လူတှစေ့ဈဆေးနတောဆိုရငျတော့ ကိုယျ့မိသားစု၊ ကိုယျ့အကွိုကျ၊ အစရှိတာတှနေဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာမေးခှနျးမြားသညျ မသငျ့လြျောပေ။ အလုပျခှငျထဲမှာ ဆိုလညျး ဒီအတိုငျးပါပ။ဲ အပွနျအလှနျ ပွောနသေူနှဈဦးရဲ့ ဆကျဆံရေးပျေါ လိုကျပွီး အခြို့ မေးခှနျးတှကေို မေးနိုငျဖွနေိုငျပါတယျ။
သတျမှတျအသုံးအနှုနျး (Register Use)
သတျမှတျအသုံးအနှုနျး (Register Use) သညျ သငျနှငျ့ သငျစကားပွောနသေူ ကွားမှာရှိ တဲ့ ဆကျဆံရေးပျေါ မူတညျပွီး သုံးရမဲ့ ဘာသာစကား အမြိုးအစားကို ပွောခွငျးဖွဈ တယျ။ သငျနှငျ့ စကားပွောနသေူသညျ သငျ့ရဲ့ လကျအောကျငယျသားလား? ဒါမှမဟုတျ ထိုပုဂ်ဂလျသညျ သငျ့ရဲ့ အထကျလူကွီးလား?။ ဒီလူနဲ့သငျဟာ ရငျးနှီးလား? နောကျ ပွောငျလို့ရလား? ။
ယဘေုယအြားဖွငျ့ အခွအေနဟော ရငျးနှီးမှုပိုလလေေ စကားအသုံးအနှုနျးကလညျး အရပျဟနျပိုဆနျလလေပေါပဲ။ US မှာဆိုရငျ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှဟော အမြားအားဖွငျ့ အခငျြးခငျြး ပထမနာမညျ(first name) ချေါပွီး အရပျသုံးစကား ကိုပိုသုံးကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈဖကျမှာလညျး အထကျလူကွီးနဲ့ပွောတာဆိုရငျတော့ မှနျကနျယဉျကြေးတဲ့ စာစကား ပစေကား (formal language) ကိုပဲ အသုံးပွုဖွဈကွပါလိမျ့မယျ။ (ဥပမာ Ms. Smith.)
အရေးကွီးမှုသညျ ကိုယျပေးခငျြတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျရဲ့ အရေးကွီးပုံနှငျ့ပတျသကျပါတယျ။ အရေးကွီးပုံကို ကိုယျသုံးလိုကျတဲ့ ဘာသာစကားအသုံးအနှုနျးကလညျး ဖျောပွနပေါလိမျ့မယျ။ ပွောလိုတဲ့အကွောငျးအရာက အရမျးအရေးကွီးနပွေီး ကိုယျ့ရဲ့ လကျအောကျငယျသားနဲ့ ပွောနတေဲ့ အခြိနျဆိုရငျ အမိနျ့ပေးတဲ့ပုံစံ (Imperative form) ဟာ သငျ့တျောပါလိမျ့မညျ။ ဥပမာ Mr. Jackson ကို ချေါလိုကျစမျး! (Call Mr. Jackson!) အခွားတဈဖကျမှာလညျး ကိုယျပွောမဲ့ စကားက အရေးလညျး သိပျမကွီးဘူး။ ပွောနတေဲ့သူကလညျး ကိုယျ့ရဲ့အထကျအရာရှိဆိုရငျတော့ အဲဒီလူရဲ့ အာရုံစိုကျမှုကိုရဖို့ ပိုပွီး မှနျကနျယဉျကြေးတဲ့ စာစကားပစေကား(formal forms)ကို အသုံးပွုရပါလိမျ့မယျ။
ဥပမာ- “နှောကျယှကျမိတာကိုခှငျ့လှတျပါ Mr.Brown။ ဒါပမေဲ့အခြိနျလေး ပေးနိုငျတဲ့အခါကရြငျ ဒီအစီရငျခံစာကို တဆိတျလောကျ ကွညျ့ပေးနိုငျပါမလား ခငျဗြား။”
ဒီနရောမှာလညျး အမရေိကနျလုပျငနျးခှငျ တှမှောဆိုရငျ ပိုအရေးကွီးတဲ့ စကားမြားကို ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ဒဲ့ဒိုး ပွောတတျကွပါတယျ။သိပျအရေးမကွီးတဲ့ စကားမြားကိုတော့ စာစကားပစေကား (formal language) ကို အသုံးပွုပွီး ပြော့ပွောငျးအောငျ လုပျကွပါတယျ။
စီးပှားရေးလုပျငနျး အခွအေနမြေားနှငျ့ ဆီလြျောသော ဘာသာစကား - အပိုငျး (၂)
စီးပှားရေးလုပျငနျး အခွအေနမြေားနှငျ့ ဆီလြျောသော ဘာသာစကား - အပိုငျး (၃)
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on October 13, 2011 at 10:51
Permalink Reply by 3n91h1k8qr49w on October 13, 2011 at 11:35
Permalink Reply by Thet Hnin Yee on October 13, 2011 at 11:55
Permalink Reply by hninthazin on October 13, 2011 at 13:19
To speak formaly, how can I study and practice?
Would u mind to answer me how to know which word is formal or not?
Do I use dictionary to know the word is formal or not?
Permalink Reply by zaw aung on October 13, 2011 at 18:46
u don't need to study it specially. u read many english novels, retold or original, and watch many english speaking movies then u will know it automatically.
Permalink Reply by saneleihtun on October 13, 2011 at 19:15
would u mind +Ving, I think, I hope u can use the correct form
Permalink Reply by chochopyone on October 13, 2011 at 16:12
Permalink Reply by 1z32bac4b8r2j on October 13, 2011 at 16:40
Permalink Reply by Ratan Biswas on October 13, 2011 at 18:28
Permalink Reply by 16ht9n2vl6ixc on October 13, 2011 at 22:55
Thanksalot. I am waiting part(2)..
Permalink Reply by Myo Thaw Htut on October 14, 2011 at 13:55
Permalink Reply by Pi Pi on October 15, 2011 at 18:46
စကားအသုံးအနှုန်းဆိုတာ တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ Hoping for coming posts.